ပိုင်သွားပြီ – Grab Love Story
ဒေါ်မျိုးမမ လူတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ရန် သူမတို့ အချိန်းအချက်လုပ်ထားရာ တည်းခိုခန်းသို့ ရောက် လာခဲ့သည်။ သူမနှင့် တွေ့ရမည့်သူ၏ အခန်းတံခါးကို ခေါက်လိုက်ရာ ထိုသူ တခါးလာဖွင့်ပေးတော့သူမ ဝင် လာခဲ့သည် တံခါးလာဖွင့်ပေးသူမှာ သူမတို့ ရက်ကွက်ထဲ တွင်နေသော မြင့်မောင်ပင်ဖြစ်သည် မြင့်မောင်မှာ မျိုးမမ နှင့် ငြိစွန်းနေတာ ၆ လလောက်ရှိ ပီဖြစ်သည် သူမ နာမည်မှာ ဒေါ်မျိုးမမုဖြစ်ကာ အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ် မုဆိုးမ သားတစ်ယောက် အမေဖြစ် သည် သူမ၏ သားနာမည်မှာ မျိုးမင်းထိုက် အသက် ၁၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည် သူမသည် လင်ယောက်ကျား ဆုံးပါးထဲက နောက်အိမ် ထောင်မပြုပဲ အပြင်တွင်ပင် သူမသားမသိအောင် သူမနှင့် အသက်အရွယ် တူသော ယောက်ကျားကော သူမထက်ကြီးသော ယောက်ကျားများ မိမိသားနှင့် ရွယ်တူကောင်လေးအရွယ်များပါ ဘာညာအီစီကလီ လုပ်ကာ အထာပေးပီး သူတို့မှ သူမကို ချဉ်းကပ်လျင် လွယ်ကူစွာပင် ကုန်းတတ်သော ကြိုက်ကုန်း တစ် ဦးလိုပင်ဖြစ်နေပါသည် မျိုးမမက်အရင်ထဲက ကာမတဏှာ အားကြီးပေသည် သူမတို့သားအမိသည် လင်သားမဆုံးခင်ကထားခဲ့သော ငွေကြေးပစ်စည်းများ ပြည့်စုံစွာရှိရာ မပူမပင်နေခဲ့ရသောကြောင့် သူမ၏ အသားရေများ မှာ ဖြူနုနေကာ ခန္ဒာကိုယ် အချိုးအဆက်မှာလည်း အချိုးအစာ်းပြေပြစ်ပြီး ရင်ထွားကာ ခါးလေးကမဆိုစ့် လောက်တုတ်ပေမယ့်လုံးတစ်တဲ့တင်စိုင်တို့ကိုကြောင့်။
မသိသာလှပေ လုံးကြီးပေါက်လှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဲခလေးတစ်ယောက်ပင်မွေးထားသည့်အတွက် အရွယ် မကျပဲ နုပျိုပါသည် သူမ၏ ဗိုက်ခလေးမှာ အနဲပူသော်လည်း ပေါင်တံရှည် သွယ်တော့ မသိသာပါ အထူးခြားဆုံးက သူမ၏ ဖင်ကြီးများနှင့် နို့ကြီးပင် ဖြစ်ပီး မြင်ရသူပုရိသတို့အကြိုက်ဖြစ်သည် မြင့်မောင်မှာ သူမနှင့် ရွယ်တူလောက်ရှိပီး ခလေးနှစ် ယောက် မုဆိုးဖိုဖြစ်သည့် ကြောင်ဖားကြီးတယောက် ဖြစ်လေသည် ကုတင်ပေါ်သို့တက်ကာ သူမ၏ အကျီနှင့် ဘရာကို သူကချွတ်ပီး ထမီနှင့် ပင်တီကိုပါ ချွတ်ပီး သူမကို လေးဘက်ကုန်းခိုင်းပီး နောက်မှ ဆောင့်လိုးပီး မိနစ်၃၀ လောက်ကြာသောအခါ သူမကောသူပါပီးသွားလေသည် သူမတို့ ၄ချီဆွဲပီး တည်းခိုခန်းရှေ့ ရောက်ချိန်တွင် သူမနှင့် မြင့်မောင်ကို သူမ သားဖြစ်သူ မျိုးမင်းထိုက် မြင်သွားပီး ကြည့်နေသည် သူမက သား ဟု သူ့ကိုခေါ်လိုက်ရာ သားဖြစ်သူ သူမ ကို ကျောခိုင်းကာ လှည့်ထွက်သွားလေသည် သို့နှင့် သူမ အိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပီး သားဖြစ်သူ က တော့ပြန်မရောက်သေးပါ မျိုးမင်းထိုက်သည် အစောက တည်းခိုခန်းမှအတူ ထွက်လာသော မိခင်နှင့် ရပ်ကွက်ထဲမှ ကိုမြင့်မောင် အတူတွေ့လိုက်ရစဉ် ဒေါသ ထွက်မိကာ အရက်ဆိုင် တွင် အရက်သောက် နေတော့လေသည် သူ့အမေ ဒေါ်မျိုးမမ သူမသိအောင် လူတကာနှင့် လိုက်ကုန်းနေသည့်အကြောင်းအား သိတာကြာပီ သို့ပေမယ့် သူမျက်စိနှင့် မမြင်ရသဖြင့် သူဘာသိဘာ သာပဲနေခဲ့သည် သို့ဖြင့် သူအရက်သောက်ပီးထိုင်နေတာ မိုးပင်ချုပ် နေသည် သူ့အမေအကြောင်း သူထိုင်ကာ စဉ်းစားနေသည် အမေသည် ဖင်ကြီး နို့ကြီးကာ ကိုယ်လုံးလှပတောင့်တင်းသည်ကို သူ ယခင်က သူမကိုသတိထားကြည့်မိသည် အိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့လိုက်သည် အမေက သူ့ကိုစောင့်နေပါသည်။
သူမကို ကြည့်လိုက်တော့ မိန်းမဝတ်လက်တစ်လုံး စွပ်ကြယ်လေးဝတ်ထားပီး ထမီအပါးလေးဝတ်ထား သည် အမေ့နားတွင်ထိုင်ကာ သူမကို ကြည့်နေပီး အမေ ဆိုပေမယ့် လိုးချင်လာမိသည် လူကလည်းအရက် သောက်ထားသဖြင့် အမှားအမှန်ကိုမခွဲခြားနိုင်ပါ အမေ ညနေက ကိတ်စကို တောင်းပန်ပါတယ် သားသား အမေ့ကို ခွင့်လွတ်ပါ အမေနောက်ကို မဖြစ်စေရဘူး သိလား သားသား ဟု ….. သူ့ ပခုံး လေးများကို ဖက်ကာ အမေကပြောပါတယ် သား ဒီအတိုင်းတော့ ခွင့်မလွတ်ွနိုင်ဘူး အမေ သားတောင်းတာဆိုတာ အမေ ပေးမှ ခွင့်လွတ်မယ် ဟုသူမကိုပြောလိုက်သည် အမေပေးမယ် သားသား ပြော အမေ့ကို သားလိုးချင်တယ် ဟု ပြောပီး သူမလက်လေး ကို သူလီးပေါ်တင်ပေးလိုက်ရာ သူ့ ကို ဂွင်းထုပေးနေသည် ပီးတော့ သူတခါးပိတ်ပီး အမေ့ကို အခန်းထဲခေါ်လာ ပီး သူဝတ်ထားသော အဝတ်စားနှင့် ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်သည် အမေကလည်း သူမ စွတ်ကျယ်လေးကို ခေါင်းပေါ်မှ ကျော်ချွတ်ပီး ထမီကိုလည်း ဖြေချလိုက်သည် သူတို့ ၂ ယောက်စလုံး ဝတ်လစ်စစ် ဖြစ်သွားကြသည် သူက အမေ့နွုတ်ခမ်းကို စုပ်ကာနမ်းပီး သူမ က သူ ပါးစပ်ထဲ သူမလျာထဲ့ကာ လျာချင်းကလိ နေကြသည် အတန်ကြာတော့ သူ့ရှေ့ ဒူးထောက်ထိုင်ချပီး အမေ သူ့ လီးကို ပါးစပ်ထဲ ထဲ့ကာ စုပ်ပေးပီး သူ့ လအုနှစ်လုံး ကို လက်နှင့် ညင်သာစွာ ဖြစ်ပေးနေရာ မကြာခင် သူမ ၏ ခေါင်းကို သူ့ လက်နှစ်ဘက်နှင့် ကိုင်ပီးလိုးနေလိုက် ပီး ခဏအကြာတွင် သူ့ဆီးခုံနှင့် သူမ မျက်နှာကို ကပ် ကာ သုတ်ရေများကို အမေ့ ပါးစပ်ထဲ ပန်းထဲ့လိုက်သည် ဂွပ်ခနဲ သူ့သုတ်ရေများကို တစက်မကျန် သူမမျိုချပစ် ပီး သူ့ ဒစ်ပတ်လည်ကို သူမလျှာလေးနှင့် ယက်ပေးနေ ပါသည် သူနှင့်အမေ အိပ်ယာထက်တွင် နားနေလိုက်ကြပီး အမေ့နို့ကြီး ၂လုံးကို သူ ထကာ ပါးစပ်ထဲထဲ့ကာစို့ နေပီး နို့သီးခေါင်းလေးကိုလျှာနဲ့ ယက်ပေးလိုက်သည်။
ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် သူနို့တစ်လုံးကို လက်နှင့်ပွတ် သပ်ပီး ကျန်သည့်ဖက်သို့ပါ အမေက သူ့ခေါင်းကိုမကာ တင်ပေးသည်ဖြစ်ရာ သူစို့နေလိုက်သည် နို့စို့ ပီးတော့.. . သူမ ဗိုက်သားများကို လျှာနှင့်ယက်ပီး ချက်တိုင်လေးအတွင်းကိုထဲ့ကာ မွေပီးထိုးနေလိုက်သည် သူမပေါင်ကြား သူ့မျက်နှာအပ်ကာ အမေဖြစ်သူ၏ စောက်ပက်ကြီးအတွင်းကို လျှာနဲ့ ထိုးယက်နေလိုက်ပီး စောက်စိလေးအား လက်နှင့် ပွတ်ပေးလိုက်ရာ ခဏအကြာ သူ့မျက် နှာကို သူမလက်နှင့် အဖုတ်ကို ဆွဲကပ်ကာ စောက်ရည်များထွက်ကာ ပီးသွားလေသည် သူလည်း ထွက်သမျ အမေ့စောက်ရည်များတစက်မကျန် မြိုချကာ နွုတ်ခမ်း တွင်ပေနေသော စောက်ရည်များကိုပါ လျှာနဲ့ သပ် လိုက်သည် အမေကောသူပါ နားနေပီး ၅မိနစ်လောက်တွင် သူမ က သူ့လီးကို ဂွင်းထုပေးနေရာ တောင်လာသဖြင့် အမေက သူ့ကို ပေါင်ကားပေးပီး သူ့ပေါင်ကြား ကို လက်နှင့်ပြလိုက်သည် အမေ့ကို လိုးပေးတော့ သာသား အမေ လိုချင်ပီ ဟု ဆိုတော့ သူလည်း ဒူးထောက်ကာ အဖုတ်ထဲ လီးထဲ့ ပီးလိုးတော့သည် စွိ ဖွတ် ပလောက် ပလောက် အ မေ့ သားလေး ဆောင့်လိုးပေး သူမနို့တွေကို ကိုင်ကာ လိုးလိုက်ရာ သူမပီးသွားလေသည် သူလည်း ခုနက အမေလွေပေးထားသဖြင့် ခဏလေး မပီးပဲ ကြာရှည်စွာလိုးနေသည် သူမ ဂျိုင်းနှစ်ဖက်ကြား လက်ထောက်ကာ သူ့အမေ ဖင်ကြားသို့ လအုဖြင့် ထိမိနေရာ တဖတ် ဖတ် တဖွတ် ဖွတ် ကြားနေရပီး လိုးနေရာ သူလည်း ၁၀ မိနစ်လောက် မှာ ပီးသွားလေသည် အမေနှင့်သူ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖက်ကာ နားနေကြပါသည် ။
အမေ နောက်ကို ဘယ်သူနဲ့မှ မလိုးနဲ့တော့ သားပဲ အမေ့ကို နေ့တိုင်း အမြဲ လိုးပေးမယ် အင်းပါ သားရယ် စိတ်ချပါ အခုကစပီး အမေ့ကို သားသား ပိုင်သွားပါပြီ ဟု အမေက သူ့ကို ပြုံးကာ သူ့ရင်ခွင်ထဲ သူမခေါင်းလေးတိုးဝင်ကာ ပြောပါသည် အမေနှင့်သူ အတန်ကြာနားပီး ခဏတွင် 69 ပုံစံဖြင့် သူမက သူ့လီးကိုစုပ်ပီး သူမအဖုတ်ကို သူက ယက် ပေးနေလိုက်သည် ပလွပ် ပြလပ် ပလွတ်…………. ၅ မိနစ်လောက် ယက်ပီး စုပ်ပီး သူက သူ့အမေ ကို လေးဘက်ကုန်းခိုင်းရာ သူမက ခါးကိုခွက်ကာ ဖင်ကို နောက်သို့ ပစ်ပေးထားရာ အမေ၏ အိုးကြီး သည် ကားထွက်နေသည် သူလည်း အမေ့ နောက်သို့ မုဆိုးထိုင်ကာ သူ့လီးထိပ်ဖူးကြီးဖြင့်အဖုတ်ဝထဲဆောင့်ထဲ့လိုက်သည ဘွတ် ဘလစ် တစ် တစ်…ဒုတ် အင့်…….. အရှီး ကျွတ် စ်းး အမေ သားလိုးတာ ကောင်းလား ကောင်းတယ် သား ဆောင့်လိုး အမေ့အဖုတ် ကြီးထဲ သားလီးကြီးနဲ့ ဆောင့်လိုးပစ်စမ်း သား သူလည်း သူအမေ စောက်ဖုတ်ြကီးကို နင်းကန် ကြုံးလိုးနေသည် အ အမေ့ ကောင်းတယ်…. သားသား အ အီး ဟင်း ဟင်း အမေ အသံကျယ်ကြီးဖြင့် အော်ကာ ငြီးညူပီး ပီးသွားသည် ၁၅ မိနစ်လောက် မနားတမ်း ဆောင့်လိုးကာ သူပီး ချင်လာပီး အမြန်ဆောင့်လိုးကာ အမေ၏ အဖုတ် ထဲသို့ သူလီးမှ သုတ်ရည်များပန်းထွက်ကာ ပြီးသွား ပီး အမေလည်း နောက်တချီ ထပ်ပီးသွားသည် ထိုနေ့ညက အမေနှင့်သူ နားလိုက် လိုးလိုက် လုပ် နေသည်မှာ ၅ချီလောက် ထပ်လိုးလိုက်တာ မနက် ၃ နာရီလောက်မှပင် လိုးပွဲကြီး ပီးသွားကာ အိပ်လိုက်ကြရာ နေ့လည် ၁၂နာရီကျော်မှ နိုးကြလေသည် ရေမိုးချိုးကာ သူတို့သားအမိ အပြင်သို့ထွက်ကာ ဆိုင်မှာပဲံ ..ထမင်းဝယ်စားလိုက်ကြသည် အပြန်ကျတော့ အမေဖြစ်သူ ဒေါ်မျိုးမမသည် ဆေးဆိုင် တွင် ဆေးကတ်လေးဝယ်ပီး သူတို့ ..အိမ်ပြန်ခဲ့ကြပီး အိမ်တခါးပိတ်ကို ပိတ်ကာ အခန်းထဲဝင်လာသည် အမေ အဲဒါ ဘာဆေးကတ်လေးလဲဟု သူကမေးရာ ဒါ တားဆေးလေ သားရဲ့ …. ခလေးမရအောင်သောက် တဲ့ဆေးဆိုပီး သူ့ကိုပြောသည် အမေနှင့် သူအဝတ်အစားများ ချွတ်ပီး လိုးကြသည် ။
ပီးတော့ ခဏနားကာ အမေက သူ့လီးကို သူမ နို့ ၂ လုံ့းကြားသို့ တင်စေပြီး နို့ကိုလိုးခိုင်းသည် သူလည်း အမေ့ ကိုယ်ပေါ်တက်ခွကာ လီးနှင့် သူမ နို့ ကြီး ၂ လုံးကြားသို့ လိုးနေရာ မကြာခင် သူ့လီးကို သူမ နို့ကြီး ၂လုံးကြားမှထုတ်ကာ သူမမျက်နှာပေါ်သို့ သူ့လီးကို လက်နှင့်ကိုင်ပီး ဂွင်းထိုက်လိုက်ရာ သုတ်ရေ များထွက်ကုန်သည် သူမက မျက်နှာပေါ်တင်နေ သော သုတ်ရည်များအား လက်နှင့်ယူကာ သူမပါးစပ်ထဲသို့ ထဲ့ကာ လျာပေါ် တင်ပီးယက်နေတော့သည် ………ပြီး။